ဂယ်ရီဝီလ်ဆင်သည် Pro-porn လိင်စိတ်ပညာရှင် Nicole Prause (၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီ) မှသင်၏တရားဝင် ဦး နှောက်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ဂယ်ရီ Wilson သည်လိင်တူချစ်သူအခွင့်အရေးအတွက်လိင်တူချစ်သူအားဒုတိယတရားဝင်အနိုင်ရရှိခဲ့သည် (၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီ)
ဂယ်ရီ WilsonPorn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်) Sexologist ဆန့်ကျင်ရေးဥပဒေအရအောင်ပွဲခံ နီကိုးလ် Prause
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Prause သည်ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ Wilson အားဆန့်ကျင်သောတားမြစ်မိန့်ကိုရှာခဲ့သည်။ အဆိုပါ တရားရုံးက၎င်းကိုပယ်ချခဲ့ပြီး Wilson ၏ SLAPP ဆန့်ကျင်ရေးအဆိုကိုလက်ခံခဲ့သည်, Prause ထွက်ခွာသည်သူ၏ရှေ့နေအခကြေးငွေပေးဆောင်ဖို့တာဝန်ရှိသည်။
နောက်ခံသမိုင်း: 2013 ဟောင်းတဦး UCLA မှသုတေသီနီကိုးလ် Prause အတွက် ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဂယ်ရီ Wilson က, နှောင့်ယှက် libeling နှင့် cyberstalking စတင်ခဲ့သည်။ (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှစပြီးပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းမှချီးကျူးဂုဏ်ပြုခြင်းကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုခြင်းကိုမခံပါ။ ) သူမသည်သုတေသီများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များ၊ ကုထုံးပညာရှင်များ၊ စိတ်ပညာရှင်များ၊ UCLA လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်းတစ် ဦး၊ က အချိန် မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာအများအပြားပါမောက္ခ IITAP, ခါးပန်းက The New ကိုမူးယစ်ဆေး, ထှကျမွောကျရာ Cry, NoFap.com, RebootNation, YourBrainRebalanced သည်ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ် Fight အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ၎င်း၏မိဘကုမ္ပဏီ MDPI အမေရိကန်ရေတပ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များသည်ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ်၏ဦးခေါင်းကို CUREUS, နှင့်ဂျာနယ် လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း (ကြည့်ပါ - နီကိုးလ် Prause ၏မလိုတမာသတင်းပို့ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အားမဖွယ်မရာအသုံးပြုခြင်းခံရသူများစွာ.)
မည်သည့်ကြီးကြပ်မှုမှကင်းလွတ်ပြီးယခုတွင်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ခြင်းမှ Prause သည်မီဒီယာမန်နေဂျာနှစ် ဦး မှထပ်တိုးခဲ့သည် မီဒီယာ2×3ကုမ္ပဏီရဲ့သေးငယ်သောတည်ငြိမ်မှုကို "ပူးပေါင်းသူများ" သို့ (မီဒီယာ2×3သမတ Jesse Ponce ကဖော်ပြသည် သူသည်ဟောလိဝုဒ်မီဒီယာနည်းပြနှင့်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်.) သူတို့အလုပ်သူတို့ ရန် နေရာအရပ်ဆောင်းပါးများ စာနယ်ဇင်းအတွက် Prause featuring, သူ့ကိုရှာဖွေ စကားပြောတွေ့ဆုံမှု လိုလားတဲ့ porn နှင့် ခေတ်ရေစီးကြောင်းနေရာများ။ တစ်ပါမယ်ဘက်မလိုက်သိပ္ပံပညာရှင်များအတွက်ထူးဆန်းနည်းဗျူဟာ။
ညစ်ညမ်းသောလုပ်ငန်းကိုသွယ်ဝိုက်ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ ကြော်ငြာ hominem သူမက "ဆန့်ကျင်ညစ်ညမ်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ" (မကြာခဏကဤပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏သားကောင်ဖြစ်ဟုဆိုကာ) အဖြစ်အမည်တပ်ထားသောကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အဖွဲ့အစည်းများပစ်မှတ်ထားမှတ်ချက်။ ဤနေရာတွင်မှတ်တမ်းတင်: စာမျက်နှာ 1, စာမျက်နှာ 2, စာမျက်နှာ 3နှင့် စာမျက်နှာ 4.
အဆိုပါ FSC တိုက်ရိုက်ထောက်ခံမှု (အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း), AVN (အရွယ်ရောက်ပြီးသူဗီဒီယိုသတင်း), porn ထုတ်လုပ်သူများ, အဆိုတော်များနှင့်၎င်းတို့၏အစီအစဉ်များ။
သူမ၏ tweets မှသည်ကြောင့် Prause အဆိုပါလည်းတက်ရောက်ခဲ့သည်ထားပြီးပုံ အရွယ်ရောက်ပြီးသူဗီဒီယိုသတင်းဆုပေးပွဲ။ ၂၀၁၅ ဇွန်လတွင် Prause က Jeanne Silver ၏ (ညစ်ညမ်းကြယ်ပွင့်တစ် ဦး) ၏ဇာတ်လမ်းကို“ AVN ၌” ကြားနာခြင်းကိုဖော်ပြခဲ့သည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူဗီဒီယိုသတင်းဆုပေးပွဲတစ်ဦးဖြစ်သောကြောင့် အရွယ်ရောက်ဗီဒီယိုသတင်းအတွက် Google ရှာဖွေရေး အများအားဖြင့် AVN ဆုပြန်လည်ရောက်ရှိ; ဒုတိယ AVN ကုန်စည်ပြပွဲ) ဖြစ်ခဲ့သည်။